Dowlad goboleedka Galmudug oo maanta si wada jir ah looga ciiday.(SAWIRO) – SBC
Dowlad goboleedka Galmudug oo maanta si wada jir ah looga ciiday.(SAWIRO)
Waxaa maanta Siweyn looga Ciiday Magaaladda Gaalkacyo ee Xarunta Dawlad Gobaledka Galmudug, Ayadoona dad Gaaraya Kumanaan ay maanta iskugu soo baxeen Fagaaraha Sheekh ilka Dahab, halkaasi oo lagu tukaday Salaada Ciidul Fidriga.
Fagaaraha Sheekh ilka Dahab ayaa waxaa ku sugnaa Madaxweynaha Dawlada Gobaledka Galmudug Maxamed Axmed Caalin, Gudoomiyaha Baarlamaanka Xasan Maxamud Hayl, Xubno ka tirsan Labada Gole ee Xukuumada iyo Baarlamaanka, Saraakiisha Ciidanka, Culuma’udiinka, Odayaasha dhaqanka iyo Dadweyne kale oo aad u farabadan, Ayadoona ay buux dhaaftay Goobta Salaada lagu tukanayay oo ahayd meel aad u balaaran.
Qudbado kala duwan ayaa halkaasi laga soo jeediyay, Ayadoona halkaasi ay ka hadleen masuuliyiin aad u farabadan oo uu ka mid yahay Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Xasan Maxamud Hayl, Wasiir ku xigeenka Arimaha Gudaha iyo Amniga Axmed Maxamud Xasan Baasto, Dhanka Culumada Sheekh Muxidiin Yuusuf Barre iyo Culumo kale.
Amaanka Goobta ayaa waxaa Sugayay Ciidamada Nabad Sugida Galmudug, Ayadoona Dadka halkaasi galaya la baarayay, waxaana Guud ahaan Goobtaasi isku gidaamay Ciidamada Amaanka, Ayagoona ilaalinayay in halkaasi dhibaato ay ka dhacdo maadaama ay ku sugan yihiin Madaxda ugu sareysa Galmudug iyo Shacab aad u farabadan.
Ugu danbaytii Madaxweynaha Dawlada Gobaledka Galmudug Mudane Maxamed Axmed Caalin ayaa Qudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa halkaasi uga jeediyay dhamaan Shacabkii ku sugnaa, Asagoona ugu horayn Hambalyo ku aadan Ciidul Fidriga u diray Dhamaan Shacabka Galmudug meel kasta oo ay joogaan, waxa uuna u rajeeyay sanadkaan kiisa kale in ay barwaaqo ku gaaraan, Waxa uu sidoo kale Madaxweynaha ka hadlay Arimaha Amaanka Galmudug, Asagoona ugu baaqay Shacabka Galmudug in ay la shaqeeyaan Ciidamada iyo Dawlada si loo helo Nabad galyo, ugu danbeytii Madaxweynaha ayaa hadalkiisa ku soo gaba gabeeyay in wax weyn laga badali doono habsami u socdka Galmudug, islamarkaana dar dargalin lagu sameyn doono hawlaha Dawlada Gobaledka.
Dhan walba hajirtee Waa markii ugu horaysay ee dad tiro intaas Gaaraya ay isku yimaadaan Fagaaraha lagu tukado Salaada Ciida ee Sheekh ilka Dahab.
Madaxweynaha Galmudug Mudane Caalin o ka hadlaya Shcabweynihii salaada oogayay hortooda.